Thuthukisa Izinjongo Ngaphambi kohlelo lokusebenza lweselula | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 8, 2011 NgoLwesibili, Septhemba 4, 2012 Douglas Karr
Abantu abahle kwaWebtrends (iklayenti) bakhiphe iphepha elimhlophe elimangalisayo kuMqondisi wabo we-Mobile Analytics, U-Eric Rickson. Ukwakha Isu Lokuvuthwa Kwamaselula kanye Notshalomali uhamba ngezinkomba zokusebenza ezisemqoka kusu leselula. Ngaphandle kwesihloko seselula analytics, esinye sezigaba ezisemqoka engizitholile kwaba:
Kaningi, abathengisi beqa isinyathelo esibucayi sokuchaza nokuhlela isu lemakethe elingumahamba nendlwana, baqonde ngqo ekuthuthukisweni kohlelo lokusebenza esikhundleni salokho. Abaningi bangena enkundleni yeselula ngohlelo lokusebenza lwe-iPhone, bawele iminwe yabo, futhi bathemba ukuthi kuzuza okuthile okuhle. Abanye bakhipha izinhlelo zokusebenza zeselula kuwo wonke amapulatifomu amakhulu futhi bathemba ukuthi eyodwa izobanjwa. Imvamisa izinkampani zishicilela uhlelo lokusebenza bese zisebenzisa izinsiza zazo ukulugcina. Futhi abanye bakhetha ukugxila kuwebhu yeselula ngoba bakholelwa ukuthi izinhlelo zokusebenza zizohamba ngendlela yedayinaso.
Kade sibhala okuningi mayelana Ukukhangisa Kwamaselula lapha eMartech. Njengokuphakathi, kungenye yezinto ezikhula ngokushesha kepha ezilandelwa okungenani. Izinkampani ezihlasela iselula zivuna izinzuzo, noma kunjalo. Umthengisi we-eBay uzuziwe ngaphezu kwezingu- $ 2.5 billion ekuthengisweni ngokusebenzisa iselula ngo-2010 futhi ilindele ukuliphinda kabili lelo nani ngo-2011.
Qiniseka ukuthi ulanda leli phepha elimhlophe ukuze uthole ukuqondiswa okujulile kumamethrikhi abathengi abangayisebenzisa ukuqapha nokwenza ngcono isu labo leselula. Ngezinhlelo zokusebenza ezingaphezu kuka-450,000 laphaya, kulula ukulahleka kumxube. Ukwakha isu leselula - bese ukuhlasela ipulatifomu kuyiseluleko esingcono kunokulahla ithani lemali ekwakheni uhlelo lokusebenza okungekho muntu olifunayo, oludingayo, noma olunganikeli ngenzuzo yakho.
Tags: izicelo zeselulaIzinhlelo zokusebenza zeselula
Aug 12, 2011 ngo-11: 31 PM
Ngiyabonga, uDouglas ngeseluleko ngephepha lika-Eric Rickson… okufundwayo okuthakazelisayo. Njengonjiniyela weselula, ngijabule kakhulu ngesibikezelo seStanley Research ngabasebenzisi be-inthanethi beselula abadlula abasebenzisi bedeskithophu ngo-2014.
Uzibuza ukuthi zingaki izinhlelo zokusebenza ezizobe sezitholakala ngaleso sikhathi?
O, nesilinganiso sakho sezinhlelo zokusebenza ezingama-450,000 sasenzelwe iApple App Store - kunezinye eziningi ezitholakalayo (kungekudala zizodlula i-Apple!) Esitolo seGoogle, esitolo seAmazon, kanye nalezo zeRIM, Microsoft, njll.
Aug 16, 2011 ngo-10: 28 PM
Uqinisile impela ngokubala kohlelo lokusebenza! Ngiyabonga!